မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Phuket Dream...
မဗေဒါတစ်ယောက် အလုပ်ထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ ပြုံးလိုက်... တွေးလိုက်... ခါတိုင်း မဗေဒါကို စိတ်တိုအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေဆိုရင်တောင် အေးအေးဆေးဆေး လွန်စွာမှ စိတ်ရှည်နေလို့ ဘေးက မဗေဒါအကြောင်း အတော်အတန်သိတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကတောင် ထူးဆန်းနေလို့ ပါးစပ်ကလာထုတ်မေးရတယ်... ဘာမေးလဲဆိုတော့ "You got boyfriend now?" တဲ့... ဟား.... ဟား.... အမှန်တော့ မဗေဒါ ဒီနှစ်အတွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခရီးမထွက်ဖြစ်ပဲ ခြေငြိမ်နေခဲ့ရတာ... ခုတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးလဲသင့် ကိုယ်နဲ့အကောင်းဆုံး ကိုယ့်ခရီးသွားဖော် မိသားစုနဲ့လဲ အချိန်ညှိလို့ရ.... အဲဒိနေ့ကပဲ အစ်မဆီက အီးမေလ်းရတယ်... ၀ယ်လိုက်တဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းနဲ့ ဟိုတယ် booking လက်မှတ်... အားလုံး သေချာသွားပြီ... ဟဲ... ဟဲ... စကာင်္ပူမြို့သေးသေးလေးကနေ .... သဘာဝလေကောင်းလေသန့်တွေရှုရင်း ပင်လယ်ပြာပြာ လှိုင်းကြီးကြီးလေးတွေ ခံစားရင်း.... စားကောင်းသောက်ကောင်းတွေစားရင်... စကာင်္ပူမှာမရနိုင်တဲ့ လက်ယာမတူတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဈေးချိုချိုနဲ့ ၀ယ်ရင်း လူ့စည်းစိမ်ကို တမျိုးတမည် (ပိုက်ပိုက်ကုန်တာကို ခဏဘေးချိတ်... အဲဒါစဉ်းစားရင် ခေါင်းကိုက်တယ်...) ခံစားရတော့မယ်ဆိုတော့ ပြုံးပြီး Good Mood ဖြစ်နေတော့တာပေါ့....
လေယာဉ်ကတော့ Jet Star Asia နဲ့ တစ်ယောက်ကို အသွားအပြန် S$239 ကျတယ်... လေယာဉ်စားရိတ်ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သွားတဲ့အချိန် လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ Promotion တွေပေါ်မူတည်ပြီး တူမှာမဟုတ်ဘူး.... ဒါပေမဲ့ ယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင်ပြောပြတာ... ကိုယ်ဝယ်ပြီးမှ ပရိုမိုးရှင်းရှိလို့ ဈေးထိုးကျသွားလဲ ရင်ထုမနာ ဖြေမဆည်မဖြစ်နဲ့... ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ အချိန်ထက် ကောင်းတဲ့ အချိန်မရှိဘူးမှတ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်က အားလုံး အစီအစဉ်ချပြီး အချိန်လိုက် ၀ယ်ရတာ... ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုထဲကို အာရုံမထားနိုင်ဘူး... ဒီတော့ နင်တော့ ဈေးများတယ်.. ငါတော့ ဈေးနည်းတယ် လာပြောမနေနဲ့... ကိုယ်ရထားတဲ့ အခြေအနေက အကောင်းဆုံးပဲ... ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ့်ထက် သူများက မသိနိုင်ဘူး...
ဟိုတယ်ကို ရွေးတော့ မဗေဒါရဲ့ အစ်မက သူအရင်တစ်ခေါက်သွားတုန်းက တည်းဖူးတဲ့ Patong Bay မှာရှိတဲ့ Patong Bay Garden Resort ကိုပဲ ဘွတ်လိုက်တယ်... ဘာလို့ သူအဲဒိဟိုတယ်ကို ရွေးရလဲဆိုတော့ အဲဒိဟိုတယ်က ပင်လယ်နဲ့ နီးတယ်... ပြီးတော့ အနောက်ဖက်ကို ထွက်လိုက်ရင်လဲ Phuket ရဲ့ နာမည်ကျော် night life ဖြစ်တဲ့ Bangla Road နဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေနဲ့ Jungceylon shopping mall နဲ့ လဲနီးတယ်လေ... ပြီးတော့ ပင်လယ်ပြင်ကို မျက်နှာမူနေတဲ့ ဟိုတယ်တွေထဲမှာ ခုဟိုတယ်က အရင်ထဲကရှိတဲ့ ဟိုတယ် နည်းနည်းဟောင်းတော့ ဈေးအသက်သာဆုံးပဲ... (ဒါတောင် Apartment တို့ ဘာတို့တွေအဲဒိမှာ လုံးချင်းငှားတာတွေရှိတယ်တော့ ကြားတယ်... အဲဒါတွေထက်တော့ ဟိုတယ်နေတာက ဈေးပိုကြီးတာပေါ့နော်...နောက်တစ်ခါသွားမှာ အဲဒါတွေမှာ try ကြည့်မယ်)... အဲဒါက ၃ညအိပ်ကို S$650 လောက်ကျတယ်... (မဗေဒါတို့က အခန်းခွဲမနေချင်တော့ ၁ခန်းထဲကိုပဲ ကုတင်ထပ်တိုးပြီး အိပ်တယ်... အဲဒိတိုးတဲ့အတွက်က တစ်ညကို ယိုးဒယား ဘက် ၁၂၀၀ စီပေးခဲ့ရတယ် (၃ည ၃၆၀၀).. အစက အွန်လိုင်းမှာ ဘွတ်တုန်းကတည်းက လူထပ်တိုးမယ့် Option ကို ရွေးပြီးသား... အဲဒါကို ဟိုရောက်တော့ သူတို့ ဟိုတယ် ၀က်ဆိုဒ်က တိုက်ရိုက် မဟုတ်လို့ အဲဒါက အကျုံးမ၀င်ပါဘူးတဲ့... အဲဒိအတွက် လူထပ်တိုးတဲ့သူတွေက မနက်စာ ဘူဖေးနဲ့ တခြားဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် နောက်ထပ် ယိုးဒယားဘက် ၃၀၀၀ ထပ်ပေးရပြန်ပါရော... ပြီးတော့ Free Massage ပါတယ်လို့ ဘွတ်တဲ့ website မှာပြောထားပင်မဲ့ ဟိုရောက်တော့ သူတို့ဆီကို တိုက်ရိုက်မဘွတ်လို့ မရဘူးတဲ့ရှင်... ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်...) ဟိုတယ်က မနက်စာ ဘူဖေးပါပြီးသား... (အဲလို အဲလိုတွေဖြစ်တော့ ပိုက်ဆံက ထင်ထားတာထက် ရောက်ရောက်ချင်းနေ့မှာပဲ ပါသမျှ ပြောင်သလောက်ဖြစ်သွားလို့ Money changer ကို ကမန်းကတန်းပြေးရှာရပါလေရော... ဒီတော့ နောက်ဆို ထင်ထားတာထက် ပိုသာယူသွား... ဘယ်တော့မှ ပြန်ပါလာတယ်ဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်... ဟဲ.. ဟဲ... အဲဒိအကြောင်းတွေ နောက်ဆက်တွဲတွေကျမှ ဆက်ပြောမယ်...)
ဟိုတယ်ရော လေယာဉ်လက်မှတ်ရော သေချာသွားတော့.... ဗီဇာသွားယူတော့တာပေါ့... ယိုးဒယားနဲ့ မြန်မာနယ်နိမိတ်ခြင်းသာထိစပ်နေတာ စကာင်္ပူက သံရုံး၂ခုကျတော့ အတော်ကွာသဗျိုး.... ယိုးဒယားသံရုံးက အော့ချက်လမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲ ခြံနဲ့ဝန်းကျယ်ကျယ်နဲ့ ဟီးလို့....
ဗီဇာလျှောက်ဖို့အတွက် လျှောက်လွှာရယ်... လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန်ရယ်... ပတ်စပို့ ဓာတ်ပုံ၁ပုံရယ်... ပတ်စပို့နဲ့ အိုင်စီ မိတ္တူရယ်လိုတယ်...
ဗီဇာ လျှောက်ဖို့ တင်တဲ့ အချိန်က နေ့လည် ၁၁နာရီအထိပဲထင်တယ်... ဒီတော့ နောက်မကျစေနဲ့... မဗေဒါတို့တုန်းက လေယာဉ်လက်မှတ်လဲ မပါသွား... နေ့လည်၁၁နာရီလဲကျော်ခါနီးမို့ ၂ရက်ထပ်သွားလိုက်ရတယ်... အားလုံးပြည့်စုံရင် အားလုံး အိုကေတယ်... ပိုက်ဆံတပြားမှ မပေးခဲ့ရဘူး... စီးတီးဟောက အေးဂျင့်တွေနဲ့ လျှောက်ရင် ဒေါ်လာ ၄၀ ၅၀ လောက်တော့ ပေးရမလားမသေချာဘူး.... ခု ဗီဇာကို တစ်ပြားမှ မပေးခဲ့ရတာက သူတို့နိုင်ငံကို Tourism မြှင့်တင်ချင်လို့ Promotion ပေးတဲ့ ကာလဖြစ်နေလို့... နောက်ဆိုရင်တော့ ပေးရင်ပေးရမယ်.. ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတော့ မသိ....
၁ရက်ပဲကြာတယ်.. နောက်ရက်ညနေ ၃နာရီလောက်ကျတော့ ဗီဇာရပါပြီ... အားလုံး... Ready.... Steady.... Goooooooooooo.................
ဆက်ပါအုံးမည်.... ခုတော့ မနက်အလုပ်ရှိလို့ နားမယ်ကွယ်...........
Labels: Phuket , ခရီးသွားမှတ်တမ်း
cant wait to read next post about ur phuket trip :)
ပျော်စရာလေးတွေ ဖတ်ဖို့ မျှော်နေမယ်နော်... တော်တော်မှ ပျော်ခဲ့ရဲ့လား...
စီးတီးဟောမှာ ထိုင်းဗီဇာလျှောက်ရင် ၁၀ ပဲ ပေးရပါတယ်။ အော်.. အခုမှ စတယ်။ ပထမပိုင်းက ပြီးသွားပြီ။ :P
Not $10. I asked at SIN-Myanmar. They said $20 per person. and4working days.
I did at Myanmar agent in Boonlay market. $15 per person. If I go to Thai embassy, I need to take leave. so $15 is worth for me.
11/09/2010 2:39 PM
Waiting to continue sis. Hope can read soon
11/09/2010 5:07 PM